Soo saaraha ugufiican iyo Warshad | Medo
Sofas maqaar-gacmeedka casriga ah ee Moscow waa fadhiga dharka isku-dhafan ee maqaar qaali ah. Waxaa lagu buuxiyey MEDO qaaciddada gaarka ah ee xumbada laastikada ee cufnaanta kala duwan iyo baalka hoos, waxay bixisaa mid ka mid ah raaxada ugu wanaagsan.
Moosko waa naqshad casri ah oo leh gacmo sir ah, tolmo siman, iyo khad nadiif ah. Barkinta kursiga ayaa jilicsan oo raaxo leh markaan ku dul fadhiisanno. Moosko sidoo kale waxay leedahay hal kursi iyo laba kursi, xulashoo ballaaran sida 1 + 2 + 3 ama 1 + 1 + 2 + 3. Midabada isku dhafan sida midabka muhiimka ah ee qaybtan, waxay ku habboon tahay qolka fadhiga iyo meelaha dadweynaha.
Qolka fadhiga casriga ee fadhiga fadhiga gogosha fadhiga dharka maqaar talyaaniga ah
4-Fadhiga Fadhiga 2880x1020x750mm
3-Fadhiga Fadhiga 2080x1020x750mm
1-Fadhiga Fadhiga 1030x1020x750mm
Waxyaabaha Dibadda: Dhar Flax + Maqaarka lo'da lakabka sare + Maqaarka adag microfiber
Barkinta Fadhiista / Dhabarka Dambe Isbuunyo Adkaysi Sare
Barkinta Buuxinta Cudbiga Cunugga
Frame oo dhan: Meelaha geedka
Qaabka hoose Ahama ahama
• Dhar jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan
• Dayactir fudud oo waara
• Aad u xidho adkaysi u leh iyo kiniiniga u adkaysta
• Tayo aan la qiyaasi karin
Dharka dharka la isku qurxiyo waa qaab dhismeed aad u yar oo lagu garto cudud gacmeed jaban oo loo qaabeeyey sida ku cad Ergonomics. Fadhiga wuxuu kuyaalayaa barkin hal-gabal ah oo dhaadheer oo lagu daboolay xumbo cufan iyo baal hoos. Barkinta dambe iyo barkimooyinka waxaa ka buuxay baalal hoos u dhaca taas oo ka dhigaysa barkinta inay neefsato.
• Kursi isbuunyo tayo sare leh leh
• Ma ahan mid aad u adag, ama aad u jilicsan
• Barkinta degdegga ah ee soo kabashada
• Abuuritaanka dareen ah fadhiista daruurta
Barkimooyinka Dib-u-celinta iyo barkimooyinka kursiga ee goose-ka hoos loo maro ayaa lagu sameeyaa fayadhowr joogto ah sida lagu qeexay xaddiga cufan-cufnaanta polyurethane ee jilicsanaanta lagu daray. Barkinta kursiga iyo santuuqa gudaha waxaa lagu farsameeyaa qaab jilicsan oo jilicsan oo laba jibbaaran iyo tolmo gogol leh oo muujineysa qaabka toosan ee jilicsan ee kursiga.
• Joogto ah oo deggan
• Siibasho ka-hortagga
• Buuq la'aan
• Tixgeli dhererka nadiifinta fudud
• Qaab dhismeedka
Qoryaha geedaha leh biraha ku wareegsan. Qaab dhismeedka kursiga wuxuu ku dahaaran yahay xamil ahaanta-cufnaanta cufnaanta polyurethane. Gacmo-qabashada iyo gadaal-gadaal ee plywood ee dhumucyo kala duwan, oo lagu daboolay xumbo isku-dhafan oo cufan oo polyurethane ah. Xarumaha gacmaha iyo gadaal gadaal ayaa markaa lagu xiraa suufka loo yaqaan 'goose down quiling' ee jilicsanaanta lagu daray, oo la mariyo nadaafad joogto ah sida lagu qeexay.
• Taabashada maqaar jilicsan
• Muuqaal cad oo qurux badan
• Jilicsan laakiin waara
• Adkaysi badan
Soofayaasha maqaarka waxaa lagu sameeyaa hadhuudhka sare ee maqaarka Nappa oo leh qaabab qurux badan. Si fiican ayaa loogu dheelitiray si loo soo bandhigo muuqaal farxad leh. Midabka buluuga ah ee dhalaalaya ayaa si indho qabad leh u soo jiidan kara dareenka. Lug dheer oo dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa fadhiga sariirta leh ruux cusub.
Qaabdhismeedka, kursiga iyo daboolka dambe ee barkinta ayaa gebi ahaanba laga saari karaa dhammaan noocyada (dharka iyo maqaarka).
• Ku laabo qallooca jirka xagal raaxo leh
• Sii dhabarka nasashada heerka HBS
• Yaree daalka maalinta
Nidaamka fadhiga waxaa ka mid ah gogo 'oo isku daraya dusha sare ee wejiga miisaanka wax yeelaya isla markaana amaah ugu diraya qabanqaabooyinka. Lagu dhejiyay maqaarka qaabka alaabada maqaarka wanaagsan.
Qaab-dhismeedka dhabarka / gacan-qabsiga iyo dahaadhkiisa gudaha wuxuu muujinayaa qaab siman oo toosan oo lagu dhammaystiray tolmo labalaab ah iyo tuubooyin ku wareegsan hareeraha.
• Alwaax tayo sare leh oo la soo dhoofiyay
• Iyada oo leh xoog iyo adkaansho aad u fiican
• cimri dherer dheeri ah
Qaab dhismeedka kursiga ee alwaaxa pemanka waxaa lagu xiraa adkeysi sare, xumbada polyurethane-cufnaanta kaladuwanaanta leh xargaha gogosha leh ee roba-sare leh si kor loogu qaado raaxada. Dib-u-celinta birta ee lagu dahaadhay xumbada polyurethane-adkeysiga sare, oo lagu daboolay fiber-kuleylka kuleylka leh ee neefsanaya ee lagu dhejiyay midab cad, maro cudbi hypoallergenic ah si loo amaahdo jilicsanaan
Dharka dharka sofasku waa mid ka mid ah qaybaha wax soo saarka MEDO. Waxaan naqshadeynaa oo soosaarnaa sofas dhar ah oo aan la dhigeynin waqti aan tayo lahayn oo tayo sare leh.
Soosaarada dharka ee 'MEDO' waxaa si farxad leh u farsameeyay shaqaalaheena xirfada leh oo leh khibrad celcelis ahaan ka badan 5-10 sano warshadaha. Adoo qaadanaya heerka xakamaynta tayada adag iyo taxadarka taxadarka faahfaahinta, waxaad ku kalsoonaan kartaa tayada dharka soodhada ee MEDO oo waad ka xoroobi kartaa sheegashooyinka dambe.
Dharka casriga ah ee casriga ah ayaa ah naqshad aad u yar oo lagu garto armrest gaagaaban oo loogu talagalay sida ku cad Ergonomics. Fadhiga wuxuu kuyaalayaa barkin hal-gabal ah oo dhaadheer oo lagu daboolay xumbo cufan iyo baal hoos. Barkinta dambe iyo barkimooyinka waxaa ka buuxay baalal hoos u dhaca taas oo ka dhigaysa barkinta inay neefsato.
Soosaarayaasha maqaar raaxo leh
Waxaan u abuurnay sofas maqaar tayo sare leh qaab iyo raaxo. La shaqee haraaga maqaarka lo'da oo buuxa, waligeen iskama dhigeyno wax ku saabsan tayada iyo tayada.
Soofyada maqaarka ee 'MEDO' oo diiradda saaraya dhowr naqshadood oo qadiim ah oo ku milmay hal-abuurnimada iyo faahfaahinta. Waxaan geynay agabkeena ugufiican si aan uga dhigno midkasta shaqadooda ugu caansan ee uruurintayada. Waxay u taagan tahay awoodaha MEDO ee naqshadeynta iyo soosaarida sofas raaxo leh. Sofaskeena Cimilada, waxaad kori kartaa dukaanka alaabta gurigaaga waxaadna kalsooni ugu keeni kartaa macaamiishaada.
Sofas maqaar casri ah waa fadhiga maqaar qaaliga ah ee raaxada oo ka samaysan maqaar buuxa oo hadhuudh ah. Waxaa lagu buuxiyey qaaciddada gaarka ah ee xumbada laastikada ee cufnaanta iyo baalka hoos, waxay bixisaa mid ka mid ah raaxada ugu wanaagsan. Waxaa intaa dheer, lakab dheeri ah oo cinjirka ah iyo baal hoosaadka oo ku daraya raaxo dheeri ah buuraha. Barkinta kursigiisa iyo cududdiisa sagxadda ayaa ku leh muuqaal aad u qurux badan.
Sofas leh gacmo-gacmeed hooseeya oo jilicsan, tolmo siman, iyo xariiq nadiif ah. Barkin kursiga lagu daray bac khafiif ah oo hoose si loo hubiyo jilicsanaanta iyo raaxada markaan ku fadhiisanayno. Fadhigayagu wuxuu leeyahay hal kursi iyo labo kursi, xulashoo ballaaran sida 1 + 2 + 3 ama 1 + 1 + 2 + 3 iyo qaabka L. Waxay ku habboon tahay qolka fadhiga iyo meelaha caamka ah.
Fadhiga maqaarku waa qaab casri ah, kaas oo si adag u xulanaya qaabab jilicsan iyo jilicsan taabashada maqaarka Nappa Ka sokow, barkinta kursiga dheeriga ah ee baalashka baalku ka hooseeyo, waxaad leedahay nasasho jilicsan markaad ku dul fadhidid. Dhabarka fudud ee caatada ah ayaa kuu baneynaya boos banaan. Tani waa qayb furan oo jilicsan, waxaad ku dari kartaa kabadh dhinac ah si loo wanaajiyo raaxada nolosha.
Lug dheer oo dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa fadhiga sariirta leh ruux cusub.
Qaabka Lambar Sawir Faahfaahinta Cabirka (L * W * H)
A015 Fadhiga Labaad ee Fadhiga leh Gacanta 1630x780x750mm
Saddex Kursi Fadhiga oo leh Gacan 2280x780x750mm
Kursi Hal Kursi 700x760x750mm
Kursi Hal Kursi 780x790x1060mm
Waxyaabaha Dibadda: Maqaarka Microfiber / flannel / linen / maqaarka lo'da lakabka sare
Barkinta Fadhiga & Fadhiga dambe Isbuunyo Adkaysi Sare
Barkinta Buuxinta Cotton Doll
Qaabka hoose Jiifku Hardware
A016 Kursi Hal Kursi 860x700x820mm
Saddex Kursi Fadhiga 2300x1000x820mm
4 Fadhiga Sofa + Chaise 3450x2450x820mm
Barkinta Buuxin Buuxin
Frame oo dhan: Jumlada Dahaarka ah ee Nadiifka ah
Qaabka hoose Naxaas Ahaan
D-823 3 Kursiga Fadhiga + Kursiga Dheer 3000x1880x750mm
Kursi Kali ah + 3 Kursiga Fadhiga + Kalluunka Dheer 3850x1880x750mm
Kursi Hal Kursi 1120x960x780mm
2 Kursiga Fadhiga 1900x960x780mm
3 Kursiga Fadhiga 2210x960x780mm
L023A Shaxda Xarunta 1200x800x320mm
L023B Shaxda geeska 600x600x445mm
Waxyaabaha Dibadda: Dharka linenka + maqaar gaar ah
Barkinta Fadhiga Isbuunyo Adkaysi Sare
Gadaal Buuxinta Baalashka + Fello
Qaabka hoose Lugta Birta Kaarboonka
C + 5807 4 Fadhiga Fadhiga + Kursiga Dheer 3810x910x1630mm
C + 5807 3 Fadhiga Sofa + Chaise 2290x910x885mm
Waxyaabaha Dibadda: Dharka Dufanka + Maqaarka lo'da dusha sare
Fadhiga barkinta / kursiga dambe Isbuunyo Adkaysi Sare
D-889 Fadhiga Labaad ee Fadhiga leh Gacanta 2070x950x720mm
D-889 Kursi Hal Kursi 1020x950x720mm
Waxyaabaha Dibadda: Lakabka lo'da sare
Barkin Backrest Buuxin Buuxin
Barkinta Barkinta Buuxinta Baal
Frame oo dhan: Hardware + Gun madow Lugaha Stell ahama
D6085C 3 Kursiga Fadhiga ee Gacanta 2200x900x780mm
2 Kursiga fadhiga leh Gacanta 180x900x780mm
Kursi Hal Kursi 950x900x780mm
Waxyaabaha Dibadda: Dharka linenka / dharka farsamada Fabric / maqaarka lo'da lakabka sare
Barkinta Fadhiga Isbuunyo Adkaysi Sare / Buuxin Baaxad
Hore: Daaqad isku mid ah
Xiga: Daaqada Qaybta